PICTURES: Big names in court - Mugabe ministers, son-in-law and Chivayo - NewZimbabwe.com PICTURES: Big names in court - Mugabe ministers, son-in-law and Chivayo - NewZimbabwe.com
Former local government minister Saviour Kasukuwere arrives at the courts
Pictures by Idah Mhetu
TWO former ministers under Robert Mugabe appeared in court in Harare Wednesday on corruption charges, nearly a year after Zimbabwe’s long-time ruler was ousted from power.
Also before the courts on the same day was the formers strongman’s son-in-law Simba Chikore and controversial businessman Wicknell Chivayo.
Former information, communication and technology minister Supa Mandiwanzira faces two graft charges involving $5m. Harare’s chief provincial magistrate granted him bail of $2,000 and set his trial date for December 10.
Mugabe’s son-in-law Simba Chikore appeared in the same court for a routine remand hearing on kidnapping charges over the alleged detention of an airline official.
Controversial businessman Chivayo was also back in the courts over the $5m Zimbabwe Power Company (ZPC) scandal.
Below are images from Wednesday’s court appearances:
Above: Former cabinet minister Supa Mandiwanzira at the courts on Wednesday
Above: Simba Chikore (left) and wife Bona Mugabe arrive at the courts
Harare businessman Wicknell Chivayo (right) and his lawyers